Maxaabiis Soomaali ah oo laga daad gureeyay xabsiyada Dalka Liibiya - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Home Maxaabiis Soomaali ah oo laga daad gureeyay xabsiyada Dalka Liibiya
Hay’adda UNHCR ayaa Magaalada Tripoli waxaa ay ka daadgureysay Qaxooti ka soo jeeda Afrika oo ay Soomaalidana ku jiraan.
Dadka laga daadgureeyay Xabsi ku yaalla Koofurta Tripoli waxaa ay tiradoodu gaareysaa 325 qof oo ka soo kala jeeda Dalalka Negeria, Suudaan, Eritrea iyo Soomaaliya.
Saraakiil u hadashay UNHCR ayaa sheegay in dadkaas laga bixiyay Xabsiga Qasr Ben Gashir kaddib markii ay ku dul dagaallameen mucaaridka iyo dowladda Liibiya.
UNHCR ayaa sheegtay in dadkaas la geeyay xabsi ku yaalla Magaalada Zawiya ee Galbeedka Tripoli halkaas oo ay Hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan Qaxooyitaga sheegtay in ay ka qatar yar tahay Caasimadda Liibiya oo ay dagaallo ka socdaan.
Daa’uud waxaa uu ka mid yahay Tahriibayaasha Soomaalida ah ee ku jira Maxaabiistaas ayaa sheegay in isaga iyo Rag kale ku jiraan xerada cusub, Xaaskiisa oo Uur leh iyo Haween kalena ku jiraan Xabsi aan lahayn meel hawo laga qaato.
Matthew Brook, oo ah guddoomiye ku xigeenka UNHCR ee Liibiya ayaa sheegay in 3,600 oo Tahriibayaal ah laga daadgureeyay Caasimadda Liibiya tan iyo markii ay magaaladaas dagaallada ka billowdeen 4tii Bishan April.